Sidee baa ugu horayn qoyska loo caawiyaa? - Lastensuojelu.info
Waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan
Badanaa badbaadada carruurta waxaa la xiriirta cabsi ay dadku aaminsan yihiin,. Xaqiiqda se waxay tahay in la rabo in la caawiyo, iyadoo ilmihiina ku nool yahay gurigiisa lana nool reerkiisa. Haddii xaalada qoyska iyo carruurtu tahay iney kaalmo qof bannaanka ka ah u baahan yihiin. Muhiimaduna waxay tahay in markaa la adeegsado habka ugu yar ee suuragalka ah ee qoyska lagu caawin karo.. Adeegyada noocan ah ee ugu horeynta ah waxaa la yiraahdaa waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan. Waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan khasab ma aha, mar walbana waxay ku salaysan yihiin wadashaqayn lala yeesho qoyska. Shaqada badbaadada carruurta inteeda badan waxaaba la fuliyaa iyadoo ah waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan.
Waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan waxay noqon karaan noocyo badan degmooyinkuna way ku kala duduwanaan karaa.
Adeega guriga sid caadiga waa tusaale caawin xannaaneynta ilmaha, raashin karin, dhaqista dharka ama nadaafada. Ujeedaduna waxay tahay xoojinta reerka ladnaanshahooda iyo kahortegis ineysan dhibaato k uimaan.
Caawimada shaqo qoyska oo reerka toos guriga loogu keenayo
Shaqo qoysku waxay noqon kartaa wadahadal, talooyin iyo taageero waalidka lagu taageerayo hawshooda barbaarinta ah. Waxay noqon kartaa qoyska oo laga taageerayo hawlaha maalin walba jira, sida arrimaha meelo kale laga soo dhammaynayo ama hawlaha guriga dhexdiisa laga qabanayo, amaba waxay noqon kartaa in qoyska loo qabanqaabiyo waxqabad taageeraya ladnaanshaha ilmaha.
Qof taageere ah ama qoys taageere ah
Ilmuhu ama qoysku wuxuu heli karaa qof taageere ah ama qoys taageere ah. Qofka taageeraha ah waa qof qaangaar ah oo ilmaha ka caawiya, sida laylisyada iskuulka ama u raaca hiwaayadaha (harrastukset). Qoyska taageeraha ah waa qoys caadi ah oo uu ilmuhu ugu tegi karo hadba sida lagu heshiiyey, tusaale ahaan Sabtiyada iyo Axadaha.
Qoysaska taageerayaasha ah iyo dadka taageerayaasha ah waa loo tababaraa shaqadooda
Waxqabadka kooxda isu dhiganta (vertaisryhmätoiminta) macneheedu waa kooxo la tegi karo oo dad aad isku xaalad ku sugan tihiin baad arrimaha kala sheekaysanaysaa. Waalidiinta ajaaniibta inta badan ehelkooda iyo asxaabtooduba waa kuwo meel ka fog ku nool, sidaa darteed naadiyada (kerho) iyo horimaha (ryhmä) kala duduwan baa dadka lagula kulmi karaa. Sida caadiga ah naadiyada iyo kooxaha waxaa ka jira waxqabad, oo iyadoo la samaynayo cunto, ama shaqooyin gacanta ah ama fasax ka sheekeysi iyo isbarasho.
Ilmahu waa waajib in loo qabanqaabiyo adeeg kaalmo daryeel baxnaanin iyo terbiya, haddii uu markaa u baahan yahay. Haddii ilmuhu ku adag tahay waxbarashada, cilminafsiyaqaanaha iskuulka iyo aqlaaq dhowraha iskuulka ayaa markaa ku hagi kara ilmihii halka uu ka heli adeegyadaas uu u baahan yahay.